माेदी र ओलीद्वारा पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन ! पाइपलाइन सञ्‍चालनसँगै डिजेल-पेट्रोलको मूल्य घट्यो – Hamrosandesh.com
माेदी र ओलीद्वारा पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन ! पाइपलाइन सञ्‍चालनसँगै डिजेल-पेट्रोलको मूल्य घट्यो
काठमाडौँ २२, पुस ।
दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तर देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको आज उद्घाटन भएको छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म बिछ्याइएको पाइप लाइन परियोजनाको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा आ–आफ्नो मुलुकबाट रिमोट मार्फत ‘स्वीच’ थिचेर उद्घाटन गर्नुभएको हो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हैदराबाद हाउसबाट ‘भिडियो कन्फ्ररेन्स’ मार्फत एकैसाथ स्वीच थिचेर परियोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
उद्घाटनसँगै मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ । पहिलो चरणमा पाइप लाइनबाट डिजेल ल्याइने छ । यसपछि क्रमशः पेट्रोल र मट्टीतेल ल्याइनेछ । पाइप लाइनबाट दैनिक झण्डै चार हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाले जनाएको छ ।
सो परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रन थालेपछि वार्षिक अर्बौँ ढुवानी खर्च जोगिने बताइएको छ । पाइप लाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च कटौती हुनेछ । पेट्रोलियम आयात सस्तो हुनेभएसँगै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पनि आजदेखि लागू हुनेगरी घटाइएको छ ।
पाइपलाइनाबाट इन्धन : डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घट्यो
नेपाल आयल निगमले डिजेल/मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ । आज मध्याह्न १२ बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल/मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई/दुई रुपैयाँ घटाइएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । मूल्य घटेसँगै प्रतिलिटर डिजेल/मट्टितेल ९५ रुपैयाँ र पेट्रोल १०७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
निगमले आजैदेखि भारतबाट पाइपलाइनमार्फत इन्धन भित्रयाउँदै छ । पाइपलाइनाबाट इन्धन भित्रयाउन थालेपछि वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च बचत हुने निगमले जनाएको छ ।
काठमाडौँ , ६ असोज । झापा जिल्ला बिर्तामोड वडा नं ७ निवासी आत्मिय मित्र...
अमेरिकामा चार नेपालीको मृ’त्यु